Save the Library in Myanmar မိတ်ဆက် | MoeMaKa Burmese News & Media
★ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ★ (၁၉၁၅ ခုနှစ် - ၁၉၄၇ ခုနှစ်)
လတ်တလော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ပန်းရဲ့လမ်းပဲ့ကိုင်တဦးဖြစ်သူ တေးရေး၊ တေးဆို သားထွေး ဈာပနအခမ်းအနား ယနေ့ ၃နာရီ ရေဝေးမှာ ပြုလုပ်မယ်
ကျော်ဟုန်းရဲ့ အက်စစ်ပြင်းထဲက ရွှေ အမေရိကားနှင့် ကနေဒါသို့ ဖြန့်ချိလိုက်ပြီ
ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) - ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော် ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပမည်
ဟန်သစ်နိုင် - ABSDF မှ သီးခြားရပ်တည်ခွဲထွက်လာသော ပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေးတပ်မတော်
ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) - မြန်မာနိုင်ငံနည်းပညာကုမ္ပဏီများအား Design Thinking နည်းပညာအကြောင်း မိတ်ဆက်
အလုပ်များလွန်းသဖြင့် Facebook မသုံးနိုင်သေးကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
YPI - မူးယစ်ရာဇာအဖြစ် စွပ်စွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်စောလားပွယ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
(မိုးမခ) မတ် ၂၇၊ ၂၀၁၈
သူတို့ရဲ့ Google App ကနေ စာအုပ်တွေ၊ အညွှန်းတွေ၊ အီးဘုတ်တွေ၊ အသံဖိုင်တွေ၊ သုတေသနတွေကို လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Save the Library ဆိုတာဘာလဲ?
လူ ၁ ယောက် ၁ လ ၁ ထောင်ကျပ် စုပေါင်းထည့် ဝင်ငွေဖြင့် လစဉ်စာအုပ်ဝယ်ပြီး တက်ကြွလှုပ်ရှားနေသော စာကြည့်တိုက်များသို့ လစဉ်အလှည့်ကျ ငှားရမ်းပေးခြင်း၊
(၄) လပြည့်လျှင် အဟောင်းသိမ်း အသစ်ထပ်မံငှားရမ်းခြင်း၊
အခြားလိုအပ်သည့် အားနည်းချက် ရှိသည်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း (နည်းစနစ်၊ စာအုပ် အပိုင်လှူခြင်း၊ စာဖတ်ရှိန်မြှင့်တင်ရေး လှုံ့ဆော်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း)
စသည်တို့ ဆောင်ရွက်ပေးမည့် ကွန်ယက် အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်လိုစနစ်နဲ့ ဆောင်ရွက်လဲ ?
4 in 1 System နဲ့ ငှားရမ်းပေးပါမည်။
စာကြည့်တိုက်များ အနေနဲ့ မိမိဒေသအတွင်းနဲ့ ပတ်ဝန်ကျင်က စာကြည့်တိုက် (၄)တိုက်ပေါင်းပြီး တစ်အုပ်စု ဖွဲ့ရပါမည်။
Save the Library ကနေ စာကြည့်တိုက် (၄) တိုက်ကို အညီအမျှ စာအုပ်များ ပေးပို့ပေးပါမည်။
စာကြည့်တိုက်တွေအတွက် ဘာထူးမှာလဲ ?
မိမိတို့ စာကြည့်တိုက်တွေအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သော စာအုပ်များ ရရှိခြင်း။
စာဖတ်သူများသို့ တစ်လ (၁)ကြိမ် အသစ်များဖြင့် လဲလှယ် ငှားရမ်းပေးနိုင်ခြင်း
စာကြည့်တိုက်အနေနှင့်ရော စာဖတ်သူများအနေနှင့်ပါ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အလေ့အထကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်း။
စာကြည့်တိုက်နှင့် ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများတွင် အခြားစာကြည့်တိုက်များနှင့်အတူ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ခြင်း။
ကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ ဖြစ်စေ၊
Wave Money နဲ့ OK$ ရှိတဲ့ ဆိုင်များမှ ဖြစ်စေ၊
မိမိအကောင့်မှဖြစ်စေ Wave Money နဲ့ OK$ အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ –
ဦးဝင်းဆွေ – 09785175259
ကိုမောင်မောင်စိုး – 09798435623
ကိုတိုးလင်းအောင် (အတိုင်းအဆမဲ့ရလာဒ် စာကြည့်တိုက်)
ဖုန်း – ဝ၉ ၇၈၆၄၂၆၀၁၀
ကိုဇော်ဝင်းမောင် (လူငယ့်အားမာန် စာကြည့်တိုက်)
ဖုန်း – ဝ၉ ၇၃၅၅၁၀၈၇
ဦးဝင်းဆွေ (အလင်းတံခါး စာကြည့်တိုက်)
ဖုန်း – ဝ၉ ၅၁၇၅၂၅၉
ကိုကျော်ဆန်းလင်း (အလင်းတံခါး စာကြည့်တိုက်)
ဖုန်း – ဝ၉ ၇၉၇၆၆၀၇၇၄
ကိုညီဇေ (ပျော်ရွှင်သော ကလေးငယ်များ)
ဖုန်း – ဝ၉ ၇၉၅၅၅၇၉၅၅
ဖုန်း – ဝ၉ ၇၉၅၉၆၉၆၈၆
၁၀၆၊ အောင်မင်္ဂ္လာလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ
ဖုန်း – ဝ၉ ၄၂၀ဝ၀ဝ၄၄၉
ကိုမျိုးနိုင်ဦး (ထွန်းတောက်ရောင်ခြည် စာကြည့်တိုက်)
ဖုန်း – ဝ၉ ၇၈၃၂၂၂၀၈၃
ဖုန်း – ဝ၉ ၄၀၁၅၇၄၅၁၈
မိုးမခစာအုပ်တိုက်က စာအုပ်များကိုလည်း Save the Library in Myanmar ကွန်ယက်ကို လှူဒါန်းလျက် ရှိပါတယ်။ သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:မှတ်စုမှတ်တမ်း, သတင်းပဒေသာ